अटो सेक्टरमा व्यापक मन्दी, टाटा मोटर्सले १६ सय कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिँदै Bizshala -
अटो सेक्टरमा व्यापक मन्दी, टाटा मोटर्सले १६ सय कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिँदै
काठमाण्डौ । अटो सकेन्टरमा देखिएको मन्दीका कारण भारमा थोरै कर्मचारी जागिर जाने क्रम चलिरहेको छ ।
अब टाटा मोटर्सले आफ्नो प्यासेन्जर एन्ज कमर्सियल भेइकल कारोबारसँग जोडिएका करिब १६ सय कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने योजना बनाइरहेको छ । टाटा मोटर्सले यस योजनाअन्तर्गत भारतभर रहेका आफ्ना संयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई उनीहरुको पदअनुसार रकम भुक्तान गरेर स्वेच्छिक अवकाश दिने तयारी गरिरहेको हो ।
एक रिपोर्टका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण टाटा मोटर्सको कारोबार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यही कारणले कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको लागत कम गर्नका लागि यो कदम उठाउन लागेको हो ।
कम्पनीले यसअघि नै कारोबारमा संलग्नबाहेक अन्य कर्मचारीलाई जागिरबाट अवकाश दिइसकेको छ । त्यस्तै कम्पनीले इन्जिनियरिङ स्टाफमा पनि कटौती गर्न लागेको छ । केही सिनियर कन्सल्टिङ स्टाफको जागिर नवीकरणमा कम्पनीले विचार गरिरहेको छ ।
भारतका अटो इन्डस्ट्रीहरुमा सबैभन्दा धेरैलाई टाटा मोटर्सले रोजगारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको कर्मचारी लागत कुल रेभेन्यू १०.७ प्रतिशत रहेको छ । जब कि यसको प्रतिद्वन्द्वी कम्पनी मारुती सुजुकी इन्डियामा कर्मचारी लागत ४.९ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।
अटो सेक्टरमा देखिएको मन्दीकै कारण भारतमा रहेका हीरो मोटोकर्प, अशोक लेल्यान्ड र टोयोटा किर्लोस्कर पनि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याइसकेका छन् । – एजेन्सी
टाटाका व्यवसायिक गाडी अब अनलाइनबाटै खरीदबिक्री गर्न सकिने,
काठमाण्डौ । टाटा मोटर्सका व्यवसायिक गाडी बिक्रीवितरणका लागि...
‘मारुती ब्रेजा’ बन्यो ग्राहकको पहिलो रोजाईको कार
काठमाण्डौ । भारतमा मारुती ब्रेजा आफ्नो सेगमेन्टमा लगातार दोस्रो...
कोरोनाकालमा पहिलोपटक कार किन्ने बढे, मिनी र कम्प्याक्ट
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण पहिलोपटक कार किन्ने र दोस्रो वा...
काठमाण्डौ । कियाले भारतमा डेब्यु गरेको ११ महिनाभन्दा थोरै बढी...
नेपालमा सुजुकीको पेट्रोल इन्जिनयुक्त शानदार नयाँ ‘भिटारा
काठमाण्डौ। नेपालका लागि सुजुकी ब्रान्डका कारको आधिकारिक बिक्रेता...
नेपालमा पाइने बाइक तथा स्कुटर, मूल्य रु. १.५२ लाखदेखि रु. १.४१
काठमाण्डौ । करिब चार महिनादेखिको लकडाउन खुलेसँगै सडकमा चहलपहल...
नेपालमा कारको मूल्य कति पर्छ ? २० लाखदेखि ४.६५ करोडसम्मका
-धर्म मलाशी काठमाण्डौ । अटो मोबाइल डिलरहरुको संगठन, नाडाले सवारी...
आजबाट पठाओ र टुटलका राइडरले यात्रु बोक्ने
काठमाण्डौ । सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै पठाओ र टुटलले आज...